China Angular Contact Bhora Bearings vagadziri uye vatengesi |Xinri
● Ishanduko inotakura bhora rakadzika groove.
● Iine zvakanakira chimiro chakareruka, kumhanya kwepamusoro uye diki frictional torque.
● Inogona kutakura radial uye axial mitoro panguva imwe chete.
● Inogona kushanda ichimhanya zvikuru.
● Iyo yakakura iyo yekubata Angle ndeye, iyo yakakwirira yeaxial inotakura simba iri.
1.Angular contact ball bearings inogona kutakura zvose axial uye radial forces mune imwe nzira.Mutsara pakati pepamusoro nepamusoro pepamusoro penzvimbo yechisimba chemuviri unoputika une imwe Angle ine radial direction.Iyo yekubata Angle iAngle pakati penzvimbo yekusangana yebhora uye mujaho mundege yeradial uye mutsara wakatwasuka weanotakura axis.High precision uye high speed bearings inowanzova pa 15 degrees of contact Angle.Pasi pesimba reaxial, iyo yekubata Angle inowedzera.
2.Chivharo chekuvhara chekutakura chiri pachindori chekunze, uye zvindori zvemukati nekunze hazvigoni kuparadzaniswa.Inogona kutakura iyo yakasanganiswa radial uye axial mitoro pamwe neaxial mitoro mune imwe nzira.Kugona kwekutakura axial mutoro kunotarirwa neAngle yekubata.Iyo yakakura iyo yekubata Angle ndeye, iyo yakakwirira yekugona kutakura axial mutoro is.The kutakura kunogona kuderedza axial displacement ye shaft kana imba mune imwe nzira.
3.The axial load kutakura kukwanisa kweangular contact ball bearings inowedzera sezvo iyo yekubatanidza angle inowedzera.Iko kuonana kona inotsanangurwa sekona pakati pemutsara unobatanidza mapoinzi ekusangana kwebhora uye mijaho mundege yeradial, iyo iyo yakasanganiswa mutoro unofambiswa kubva kune imwe nhangemutange kuenda kune imwe, uye mutsetse perpendicular kune inotakura axis.
●Mutsara mumwechete angular contact ball bearing: machine spindle, high frequency motor, gas turbine, centrifugal separator, vhiri remota diki rekumberi, differential pinion shaft, booster pump, drilling platform, muchina wechikafu, kupatsanura musoro, welding machine, low noise type cooling tower, mechanical and magetsi midziyo, pendi. midziyo, muchina groove ndiro, arc welding muchina.
●Kaviri mutsara angular contact ball bearing: pombi yemafuta, mhepo compressor, marudzi ese ekutapurirana, mafuta jekiseni pombi, kudhinda muchina, replanetary reducer, kudhonza midziyo, cycloidal reducer, chikafu kurongedza muchina, magetsi welding muchina, yemagetsi soldering iron, square box, giravhiti pfapfaidzo pfuti, waya stripper, hafu shaft, yekuongorora uye yekuongorora michina, yakanaka makemikari muchina.
SIZE Principal dimensions Basic load ratings Kuneta mutoro muganhu Speed ​​​​ratings
dynamic static Kumisa kumhanya
Zvakapfuura: Single Row Angular Contact Bhora Bearings
Zvinotevera: Kaviri Row Deep Groove Ball Bearings